Ikhaya lamachibi anokubukwa, izingadi kanye nengaphambili lomfula - I-Airbnb
Ikhaya lamachibi anokubukwa, izingadi kanye nengaphambili lomfula
Rogerscale, England, i-United Kingdom
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Adam & Mary
U-Adam & Mary Ungumbungazi ovelele
I-Vale of Lorton ingenye yezindawo ezinhle kakhulu nezingonakalisiwe zamaLake, kusukela endaweni eyisicaba kanye nedolobha laseGem laseCockermouth ekugcineni kwezintaba ezimazombezombe kanye ne-Buttermere ngakolunye.
Indawo enokuthula ye-The Spinney, ngaphezu komfula i-River Cocker, enokubukwa okumangalisayo ukuya e-Whinlatter, iyindawo ekahle yokuhlola iNyakatho nentshonalanga yeLakes. Beka kumahektare amabili ezihlahla ezivuthiwe, izingadi kanye nendawo engaphambili yomfula, enezilwane eziningi zasendle.
I-Spinney, i-annexe yesitayela sekotishi ezimele yendlu enkulu, ihlangene yakha indawo eneminyaka engama-200 eyakhiwe endaweni ephansi yoMfula i-Cocker. Indlu ekuqaleni yayiyindlu yokupenda yeciko lendawo. Ngezinsika zamatshe ezansi komgwaqo owuhlava, indawo yokupaka yangasese ye-The Spinney iseduze nale ndawo. Izitebhisi ezimbalwa zamatshe ezansi eningizimu ezibheke eminyango yaseFrance yilapho ungena khona ohlelweni oluvulekile lokuhlala / indawo yokudlela - ikhishi elinesihlalo salo sefasitela elihle nendawo yokuhlala ephumulele enendawo yomlilo yesanti kanye nesitofu sokhuni esivuthayo. Phezulu ezitebhisini ezisuka lapho kufika khona kukhona igumbi lokulala eliphindwe kabili elinombhede olingana nenkosi nokubukwa okuhle ngaphesheya kwesigodi. Igumbi lokugezela elihlukene kanye negumbi lokulala elilodwa ligcwalisa indawo ephezulu.
Izingadi zinemibala kuzo zonke izinkathi zonyaka. Entwasahlobo kunezinkulungwane zama-daffodils nama-bluebell ahambisana nama-rhododendron nama-azalea nezinye izimbali ezimibalabala eziqhakaza unyaka wonke. Emini kukhona okwenzekayo njalo mayelana nengadi, ukulungiswa noma ukunakekelwa okuvamile kodwa sizama ukuhlukanisa. Izingwejeje ezibomvu, onogwaja, nezinyamazane zivame ukubonakala kanye nenqwaba yezinyoni zasengadini, ama-pheasants, ama-buzzards, amadada nezindwandwe.
Ukude nesiphithiphithi sempilo yansuku zonke, ungezwa izinyoni zicula, umoya ohelezayo ezihlahleni, izimvu zibubula nomfula ugigiyela lapho ongadoba khona noma uzihlalele ngasese ngokuthula.
Isango eliya enyakatho nentshonalanga yeLake District, i-Lorton inesitolo sedolobhana esinekhofi elihle kakhulu, izinto ezibalulekile kanye nezipho zezandla. Kukhona indawo yokucima ukoma kanye nehholo lesigodi elichumayo elinemisebenzi eyahlukene izinsuku eziningi. Zimbili izinkundla zethenisi zesimo sezulu futhi sisendleleni ye-C2C.
Ibungazwe ngu-Adam & Mary
Sihlala esizeni futhi ngokuvamile siseduze.
UAdam & Mary Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Rogerscale namaphethelo